Kumaandooska dalka oo lagu soo daray Shabaab isku reer yihiin Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Kumaandooska dalka oo lagu soo daray Shabaab isku reer yihiin Farmaajo
Macluumaad ay Keydmedia Online ka haleyso Ciidanka xoogga dalka & Nabadsugidda ayaa sheegaya in Kumandooska Soomaaliya lagu soo daray Shabaab ay isku reer yihiin Madaxweyne Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Illo ku dhaw Ciidanka xoogga ayaa Keydmedia Online u xaqiijiyay in 92 xubnood oo laga soo xareeyay Kooxda Al-Shabaab ah lagu xareeyay saldhig military oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa lagu tababaraya dhalinyaradan beesha Madaxweynaha kasoo jeeda Xerada Ceel-Saliini, oo qiyaastii 60-KM dhanka Koonfur Galbeed uga beegan Muqdisho, sida ay illo-wareedyadu sheegeen.
Inta tababarka u socdo, waxuu qof kasta oo xaasle ah uu Farmaajo amray in la siiyo $300, halka midka Iskaabulada ah qaadanayo $50, waxaana markay tababartaan lagu darayaa Kumaandooska Soomaaliya.
Macluumaadka ay Keydmedia Online haleyso, ayaa sheegaya inay jiraan dhalinyaro kale oo horey loogu tababaray Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo DANAB iyo GOR-GOR lagu biiriyay, iyagoo Al-Shabaab ah, welina feker argagaxisadda aaminsan.